Iyo yekuchengetera zvakakwana imba yekugezera inenge iri chokwadi | IPhone nhau
Kicheni uye yekugezera zvigadzirwa mugadziri Kohler yakagadzira yayo smart imba otomatiki chikuva, Kohler Konnect, iyo inobvumira zvimwe zvezvigadzirwa zvako kuti zvitaure neKeanKit uye nevamwe vabatsiri vakangwara, pamusoro pekutibvumidza kudzora mashandiro avo kuburikidza neApple application uye mirairo yezwi naSiri.
Mutsara mutsva wezvigadzirwa zvakabatanidzwa izvo Kohler Konnect anoshandisa zvinonyanya kutarisa pane yekugezera ruzivo, zvichitibvumidza kusangana nemumwe nemumwe wavo kuti zvienderane nezvatinoda uye / kana zvatinofarira nguva dzose. Iyo Kohler Konnect Shamwari App inogona kushandiswa kugadzirisa marongero, senge tembiricha uye mwenje, uye mune zvimwe zviitiko, kumisikidza zvinhu zviri kure.
Izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvitsva zvine hungwaru zvekugezera izvo iyo KOHLER inotipa:
Verdera Izwi Rakavhenekerwa Girazi, sezita zvarinoreva, igirazi rinotipa kuvhenekera inodzikira mukusimba, kusimba uye kuvhura kana kudzima kwatinogona kudzora tichishandisa mirairo yezwi.
Iyo Sensate yakateerana pombi ndeye chaiyo mukicheni mubatsiri watinogona kuyanana kuburikidza nezwi mirairo kuti kupa huwandu hwemvura yatinoda chero nguva yakapihwa, kungave kugadzira bhodhoro, zadza girazi remvura kana hari.
Iyo DTV + system yekugeza inotibvumidza gadzirisa kuyerera kwemvura yekugeza pamwe nehutsi uye mwenje, zvichitibvumira kusevha marongero aya kushandisa kakawanda.
PerfectFill tekinoroji inoitisa kupa mvura inofanirwa kuzadza bhavha pane tembiricha yatinoda, kuitira kuti maitiro ekuzadza bhavhu kune tembiricha yakakwana haisi dambudziko risingatore nguva yakareba.
Iyo Numi smart chimbuzi inopa kupisa kwetsoka, yakasanganiswa bidet, chigaro chinopisa, ambient kuvhenekera uye kunyangwe mimhanzi yekuita kuti kumirira kunakidze.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Iyo yekuchenjera yakazara yekugezera inenge iri yechokwadi
IPhone 6 bhatiri kutsiva kunonoka kusvika Kurume-Kubvumbi